Shiinaha Hoodie warshad iyo soosaarayaasha | Himilada
Hooyooyinkan la beddeli karo waxay leeyihiin xajmi weyn, feydo iyo jeeb aad u badan oo jeeb ah, sida dhidid dhidid hore oo iskuul ah. Carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweynba way qadarin doonaan jilicsanaanta gudaha iyo calaamadaha qoorta. Isku darka suufka polyester-ka ayaa ka dhigan inay u badan tahay inay yaraadaan.
1. Hooyooyinkan la beddeli karo waxay leeyihiin xajmi weyn, sanduuq ku habboon iyo jeeb aad u badan oo ka weyn, sida dhidid dhidid hore oo dugsiga. Carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweynba way qadarin doonaan jilicsanaanta gudaha iyo calaamadaha qoorta. Isku darka suufka polyester-ka ayaa ka dhigan inay u badan tahay inay yaraadaan.
In ka badan 20 midab oo la heli karo, hoodies-yada is-riixaya ayaa diyaar u ah kooxdaada ama dhacdo gaar ah. Waxay ku yimaadaan midabbo aqoonsi sare leh, sidoo kale, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo ku habboon qaabeynta naadigaaga socda ama shaqaalaha ka shaqeeya dibadda. Sidoo kale, waa la habeyn karaa waa la samayn karaa, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso koodhka midabbada aad jeceshahay.
inji Cabir S M L XL 2XL 3XL 4XL
Dhererka 26.5 27.5 28.5 29.5 30 30.5 31
balac 20 22 24 26 28 30 32
Hore: caag daabac caado caag ah oo shaqeynaya astaan ​​shaati
Xiga: polyester spandex ragga isboortiga track track fidinta surwaal dhididka tababarka la stripe dhinaca
Hoodies daabacan Customized